जनप्रतिनिधिले सुन तस्करी गर्ने, प्रहरी जोगाउने ! – आफ्नो समाचार
जनप्रतिनिधिले सुन तस्करी गर्ने, प्रहरी जोगाउने !
Afno News — २९ पुष २०७५, आईतवार ०८:३३0comment
सिरहा / सिराहको गोलबजार, ९ धुर्मीखोला नजिकबाट तस्करीक पौने दुई किलो सुन बरामद गरेके सशस्त्र प्रहरीले केही अभियुक्त उम्काउन खोजेको सार्वजनिक भएको छ । शनिबार भारतीय नम्बर प्लेटको स्कारपियो गाडीबाट एक किलो सात सय ७५ ग्राम सुन बरामद गरेको सशस्त्रले ६ अभियुक्त पक्राउ गरे पनि एक जनप्रतिनिधिसहित तीन जनालाई लुकाएको सार्वजनिक भएको हो ।
सार्वजनिक गरेको एक अभियुक्तले नै सूचना चुहाएपछि सशस्त्रले अन्य तीन जनालाई पक्राउ परेको जानकारी दिएको छ । सदरमुकाम लहानस्थित सशस्त्र प्रहरी बल हेडक्वार्टर ७ नम्बर गणबाट खठिएको टोलीले सुनसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
घटनामा अभियुक्त अमिरुल खानले अन्य तीन जना पनि पक्राउ परेको पत्रकारमाझ बताएपछि प्रहरी अप्ठ्यारामा परेको थियो । पत्रकारले थप बुझ्न खोज्दा एक दुई घण्टा पछि आउनुहोस भन्दै एसपी सोमप्रसाद गुरुङले सम्मेलन सक्काएका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकामा खबर रहेकाे छ ।
रिसाएकी श्रीमती फकाउन पनि कला चाहिन्छ, जान्नुहोस् फकाउने तरिकाहरु…
वि.सं. २०७५ कार्तिक २६ गते सोमबारको राशिफल